Kooxda Al-Shabaab Oo U Markhaati Samaysatay Inay Qabsatay Saldhig Milletariga Soomaaliya – somalilandtoday.com
Kooxda Al-Shabaab Oo U Markhaati Samaysatay Inay Qabsatay Saldhig Milletariga Soomaaliya
(SLT-Muqdisho)-Kooxda Al-Shabaab ee Dagaalka kula jirta Ciidammada Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta ee AMISOM, ayaa Shalay soo bandhigay muuqaallada weerar ay ku qabsadeen doraad Saldhigga Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Maamul-gobolleedka Jubbaland ku lahaayeen deegaanka Baar Sanguuni oo qiyaastii illaa 50KM dhanka waqooyi kaga beegan Magaalada Kismaayo.
Warka Al-shabaabSawirro laga soo qaaday Xerada oo Kooxda Al-Shabaab ku faafiyeen baraha Internet-ka ee taageera ayaa muujinaya saldhigga ciidamada, difaacyadii ay lahaayeen iyo teendhooyinka oo qeybo ka mid ah gubanayaan.
Sidoo kale, dagaal-yahanno ka tirsan Al-Shabaab ayaa gudaha xerada ku sugnaa sida ka muuqata Sawirrada la baahiyey, waxaana saldhigga ciidamada ee Al-shabaab qabsatay ku yaalla duleedka jid Laami ah oo halkaasi mara, kaasi oo ah Jidka Al-shabaab soo mareen markii ay weerrarayeen halkaasi, sida uu sheegay Taliyaha xukuma unug ka mid ah Ciidammada Saldhiggooda la qabsaday oo doraad la hadlay Laanta Afka Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Weerarka Al-Shabaab ku qaadeen xerada ayaa ku bilowday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kaddibna dagaal toos ah ayaa xigay, iyadoo uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay weerarka ku dileen illaa 27 Askari, inkastoo dhanka dowladda Soomaaliya ay iyana sheegatay inay ku dileen 87 dagaalamayaal ka tirsan Shabaab, wallow Sarkaal ka mid ah Ciidammada Dawladda Soomaaliya oo qayb ka ahaa dagaalkaasi uu Idaacadda VOA u sheegay inuu arkay illaa 8 Askari oo Al-shabaab lagaga dilay Dagaalkaasi.
Ugu dambayn, Weerarrada kooxda Al-shabaab ku qaaddo xeryaha ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ah kuwo aad u qorsheysan oo ku bilowda gaadiid la qarxiyo iyo rasaas toos ah oo ka dambaysa.
Weerarkan iyo kuwii ka horreeyay ee sidan oo kale Al-shabaab ugu qaadday Xarumaha Ciidammada Dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa intooda badan Salaadda Subax ka hor.
Al-shabaab ayaa caado ka dhigatay inay Muuqaallo ka duubto Saldhigyada ay weerarraan, haddii ay u suurto-gasho inay qabsadaan, muuqaalladaasi oo meesha ka saaraya Wararka iska soo horjeeda ee Al-shabaab iyo Ciidammada Dawladdu isku mariyaan Warbaahinta.